Banyere Anyị - Nantai Na Equipment Co., Ltd
Dizel Fuel Ọgwụ mgbapụta ...
Common Okporo ígwè Tester
Common Okporo ígwè Tools
Common okporo ígwè injector ogbo 3 ...
Pusi HEUI tester
Mapụtara Parts (CommonRail / Cat ...)
EUP / EUI ule bench / cam igbe
Pt Cummins mgbapụta na ...
Traditional n'ibu mgbapụta ...
Traditional mapụtara Parts
Taian Nantai Na Equipment Co., Ltd., emi odude ke Tianyuan Street Economic Development Mpaghara Taian City Shandong Province PR China, bụ ndị na-eduga emeputa ọkachamara amị dizel Fuel Ọgwụ System Tester na China, bụ avaiable maka Traditional mmanụ dizel injection mgbapụta ule bench , pt-CUMMIN mgbapụta na injectors Test guzoro, EDC (Electronic dizel Controler), ČR (Common Okporo ígwè mgbapụta Tester), CRI (Common Okporo ígwè Injectors Tester), nozulu Tester, na ọtụtụ ọnwụ sọ akụkụ nke nfuli.
The dizel mmanụ ụgbọala injection mgbapụta adopts na agbanwe-ugboro na agbanwe-ọsọ Usoro, nke a na-ekewa n'ime anọ usoro-12PSB series, NT2000 series, NT2001 usoro na NT3000 series, na e nwere ihe karịrị iri atọ di iche iche nke ule eguzo na a zuru ụdị na size , nke nwere ike izute nile di iche iche nke ọrụ 'choro ka ngwá. Ya mmepụta usoro bụ elu. Ya Usoro họọrọ ndị International eduga larịị.
The ụlọ ọrụ nnyocha na mmepe ike bụ ọgaranya na ule ụfọdụ zuru ezu. Taian Nantai Na Equipment Co., Ltd. nwere a siri ike esịtidem management na eguzobewo a zuru ezu na a pụrụ ịdabere quality nkwa usoro. The ụlọ ọrụ na ngwaahịa ire network agbasawo nile na obodo. The mgbe-sales ọrụ nke ngwaahịa nwere a usoro nke ya, nke nwere ike inye ndị kasị mma ọrụ maka ọrụ adọ. The ụlọ ọrụ chọrọ "n'eziokwu na pụrụ ịtụkwasị obi ọrụ na brazing ọhụrụ ụzọ ụkwụ na sayensị na nkà na ụzụ".
TAIAN NANTAI ibuo Equipment CO., LTD.
Dị na TIANYUAN Street
bụ ndị na-eduga emeputa ọkachamara na-amị na-na-eduga emeputa ọkachamara na-amị na-na-eduga emeputa ọkachamara na-amị na-na-eduga emeputa ọkachamara na-amị